Onye ode akwụkwọ: Mepụta, bipụta ma tinye ntuziaka ụdị gị na onye enyemaka ide ihe AI ​​| Martech Zone
Dịka ụlọ ọrụ na-emejuputa ntuziaka njiri mara iji hụ na ọ na-agbanwe agbanwe n'ofe nzukọ a, ọ dịkwa oke mkpa ịzụlite olu na ụdị maka nzukọ gị ka ọ na-agbanwe agbanwe na ozi ya. Olu ika gị dị mkpa iji kpakọrịta ndịiche gị nke ọma yana ịgwa ndị na-ege gị ntị okwu ozugbo na mmetụta mmetụta uche.
Kedu ihe bụ ntuziaka olu na ụdị?
Ọ bụ ezie na ntụzịaka nhụta anya na-elekwasị anya na akara ngosi, mkpụrụedemede, agba na ụdị ọhụụ ndị ọzọ, ntuziaka olu na ụdị na-elekwasị anya na verbiage, okwu okwu, na ụda nke ika gị na-eji mgbe ndị mmadụ na-ege ntị ma ọ bụ na-agụ banyere gị.
Enwere akụkụ dị iche iche nke ika ị kwesịrị itinye na ntuziaka olu gị na ụdị gị:
Ndị mmadụ - kedu ihe bụ omenala, igwe mmadụ, agụmakwụkwọ, na àgwà ala nke ndị ahịa gị lekwasịrị anya?
nghọta - kedu echiche ị ga-achọ ka ndị mmadụ nwee maka ika gị?
Mission – kedu ihe bụ nkwupụta ozi gbasara ika gị?
Ụda - kedu ụda olu ịchọrọ iji mee ka ndị na-ege gị ntị mara nke ọma? Ịchọrọ ịbụ onye nkịtị, nke ziri ezi, onye ike, onye pụrụ iche, onye na-egwu egwu, na-akpali akpali, wdg.
Okwu ochichi - kedu okwu ndị na akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ịchọrọ ka ejiri ya mee ihe ugboro ugboro?
Antony - Kedu okwu ndị a na-ekwesịghị iji kọwaa ika, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị?
Hygwọ - kedu okwu okwu akọwapụtara maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ gị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe?
Custom – kedu okwu okwu bụ omenala maka ika, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nke ọ nweghị onye ọzọ na-eji?
Ọmụmaatụ: Otu n'ime ndị ahịa anyị bụ isi nwere saịtị ebe ị nwere ike ịtụ uwe online. Uwe na- moderately ọnụ ma nke elu àgwà, anyị na-eji okwu dị ka ọnụ ala karịa ọnụ ala… nke ga-enwe a ọjọọ connotation nke àgwà. Anyị na-ekwukwa enweghị nsogbu na-alaghachi kama nsogbu na-eweta nsogbu na-alaghachi. Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere otu ihe ahụ, inwe okwu ahụ free Na saịtị ahụ niile ga-edobe ụda na-ezighi ezi mgbe anyị na-agwa ndị na-eleta saịtị ahụ okwu - ụmụ nwanyị toro eto.
Onye edemede: AI onye enyemaka ide ihe maka otu
Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ntụzịaka olu na ụdị yana ntuziaka njiri anya ha ka ndị ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ngo wee nwee ike ịdị na-agbanwe agbanwe n'ịzụlite ọdịnaya maka ika ahụ. Enwere ike itinye ya nke ọma na PDF nke a na-ekesa mgbe achọrọ ya. Ọ bụ ezie na nke ahụ na-ada uru, ọ bụghị nke ukwuu kemereme ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ndị nwere mmasị na nkwụsi ike nke olu gị ga-etinye olu gị na ntuziaka ụdị ka iji.
Onye edemede bụ ọgụgụ isi artificial (AI) onye inyeaka na-ede akwụkwọ maka otu ndị nwere ihe niile otu gị chọrọ. Dabere na ngwungwu ị debanyere aha, ị nwere ike nweta atụmatụ ndị a:
Mezigharịa na akpaaka maka mperi mkpoputa, akara edemede na grammatical.
Mpekere - snippet nkeonwe na otu maka akpaokwu ma ọ bụ ederede a na-eji ugboro ugboro.
Aro – ndụmọdụ maka imeziwanye ederede gị.
Usoro ihe omuma – ngwa njikwa okwu maka usoro akwadoro, na-echere na anabataghị.
Ụdị Edemede - ebumnobi nke ịgụ ihe, nnukwu ego, nsonye, ​​ntụkwasị obi, na nhazi nke doro anya.
Ọrụ Ndị Otu - ọrụ na ikike maka ịmepụta okwu gị na ntọala olu gị na ndị ọrụ kwesịrị itinye ha.
Ntuziaka Style - ntuziaka anabatara, ebipụtara na nke enwere ike ịkọwapụta maka nzukọ gị.
Onye edemede na-arụ ọrụ na Chrome, Microsoft Word, na Fima. Ha nwekwara API siri ike maka itinye ngwa ha n'ime usoro ndezi gị.
Gbalịa onye edemede n'efu
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Onye edemede na m na-eji njikọ njikọ m n'ime akụkọ a.
Tags: aiihe mgbochiAmamịghe echicheika oziụdị echicheika ikachromefigmaụtọ asụsụududomicrosoft okwupersonanlele akara edemedeokwu anwansịndu ndumyiringwa ngwaụdaoluolu na ụdị nduonye so deeonye nnyemaaka ide
Kedu ihe bụ Zero-Party, Nke mbụ, Nke abụọ, na data nke atọ